Famerenana amin'ny teny Espaniôla an'ny Onda V919 AIR DualOS | Androidsis
Manohy ny famakafakana ireo terminal Android izahay, amin'ity tranga ity misy a Android sy Windows 10 takelaka mampihetsi-po, izany dia ny DualOS, izay mety ho lasa iray amin'ireo fanomezana kintana amin'ireo fialantsasatra Krismasy ireo noho ny endriny manintona nentanim-panahy avy amin'ilay vaovao iPad AIR ary miaraka amina famaritana ara-teknika mahaliana amin'ny vidin'ny hadalana tena izy.
Ny takelaka resahina dia ny Onda V919 AIR DualOS izay hitantsika amin'ny maodely roa samy hafa arakaraka ny fahatsiarovany ny fitahirizana. Ka afaka mahita maodely iray amin'ny 32 gb fitehirizana anatiny ho an'ny 123 Euros fotsiny ary maodely faharoa amin'ny avo roa heny ny fitehirizana anatiny, izany hoe 64 Gb izay azontsika vidiana 140 Euros fotsiny. Takelaka sasantsasany izay holazainay aminao ny pitsopitsony rehetra, na ny tsara na ny tsy dia tsara.
1 Onda V919 AIR DualOS takelaka voatondro
2 Ny tsara indrindra amin'ny takelaka Onda V919 AIR DualOS
3 Ny ratsy indrindra amin'ny takelaka Onda V919 AIR DualOS
Onda V919 AIR DualOS takelaka voatondro
modely V919 AIR DualOS
Operating System Android 4.4 + Windows 10 na ny tany am-boalohany no azo havaozina
efijery 9'7 "Retina aseho miaraka amin'ny vahaolana QXGA 2048 x 1536 teboka
processeur Teknolojia Intel Z3735F 64 bits ary Quad core amin'ny 1 Ghz
GPU Intel HD Graphics faha-7
Tahiry anatiny 32/64 Gb miaraka amin'ny slot MicroSD hatramin'ny 128 Gb
Fitaovana hafa Vita amin'ny vatana unibody ny vy
bateria Polymer lithium 7200 mAh
lafiny X X 239 169 8 MG
lanja Gramin'ny 450
vidiny Modely 123 Euros 32 Gb y Modely 140 euro miaraka amin'ny fitehirizana anatiny 64 Gb
Ny tsara indrindra amin'ny takelaka Onda V919 AIR DualOS
Tsy misy fisalasalana ny tsara indrindra amin'ity takelaka Onda V919 AIR DualOS ity, ankoatry ny vidiny manafintohina sy tsy hita lany amin'ny fari-piainany dia ahitantsika azy io vita vita amin'ny metaly izany dia mampatsiahy antsika betsaka ny volavolan'ny Apple iPad AIR ary koa ny efijery IPS tsara indrindra miaraka amin'ny teknolojia fampisehoana retina sy ny vahaolana QXGA izay manome antsika haavo hamirapiratra sy kalitao ho an'ny fikasihana izay tena mendrika asongadino sy mahazatra an'ireo takelaka avo lenta.
Etsy ankilany, ny pitsopitsony teknika miaraka aminy iray manontolo 1,83 Ghz quad-core Intel nosoniavina processeur ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandro farany ambony, miaraka amin'ny fahatsiarovany RAM 2 Gb mihoatra ny ampy ary ny mety ny miova amin'ny sitrapo araka ny ilantsika azy eo anelanelan'ny Android sy Windows 10, ataovy mihoatra ny voatondro ny terminal fa tsy ny fiaraha-miasa aminy na ny fotoanantsika fialamboly sy fialamboly.
Zavatra iray hafa tsy maintsy asongadintsika ary tsy afaka mitsahatra ny miresaka momba azy isika, dia azy batterie namboarina lehibe tsy misy zavatra hafa ary tsy latsaky ny 7200 mah izay miantoka fizakan-tena eo amin'ny 11/12 ora eo amin'ny efijery.
Ankoatr'izay, ny toetra manohana azy ary azontsika adino ny milaza azy dia izany Onda dia efa nanamafy fa ity takelaka mampihetsi-po ity dia hahazo ny fanavaozana ofisialy ny Android 5.1 Lollipop fotoana fohy ary koa, manana Windows 10 feno ara-dalàna dia mahazo fanavaozana ofisialy Windows tsy tapaka.
Batterie 7200 mAh lehibe
Ny ratsy indrindra amin'ny takelaka Onda V919 AIR DualOS
Ny ratsy indrindra tsy misy fisalasalana momba ity takelaka DualOS tsara ity dia hitantsika ao fakan-tsary malaso ao anatiny, samy irery Vahaolana 2 mpx ary hanompo anay amin'ny alàlan'ny antso an-tsarimihetsika sy ny kaonferansa video fotsiny izy ireo amin'ny maha webcam.
Farany, lazao fa na dia tsy afaka manasongadina azy ho zavatra ratsy aza izahay, indrindra fa niasa tamin'ny Windows 10 na rehefa nandefa ny fanavaozana ny Android 5.1 i Onda, asongadino izany ny kinova 32GB an'ny fitehirizana anatiny dia latsaka kely amin'ny resaka fitadidiana fitahirizana anatinyHany ka hametrahana fanavaozana ofisialy Windows 10, dia mila manana fampidirana MicroSD na tsia izahay hampiasa azy io ho tahiry fanohanana ny rafitra miasa. Izany no antony imasoako matetika ao anatin'ity horonan-tsary mifamatotra ity fa raha hividy iray amin'ireo takelaka ireo ianao, amin'ny 20 Euros fotsiny dia azonao ilay kinova 64 Gb.
Modely 32 Gb somary zara aza
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Onda V919 AIR DualOS, manadihady takelaka DualOS mahery izahay amin'ny vidiny mihomehy
phluisma dia hoy izy:
Ary inona no tsara kokoa avy amin'ity ONda ity na ilay mitovy amin'ny Teclast ???
Mamaly an'i phluisma
Ilay Teclast lazainao fa tsy nanandrana aho, noho izany tsy afaka maneho hevitra momba azy aho, na dia milaza aminao aza aho fa mahavariana ity takelaka ity.
Juan Diego Romero Gonzalez sary placeholder dia hoy izy:
Aiza no azo vidiana.
Valiny tamin'i Juan Diego Romero Gonzalez
Modely 64 Gb http://goo.gl/WBpV9p
Modely 32 Gb http://goo.gl/D2Pu5q
Namaky olona tonga tany amin'izy ireo aho nefa tsy Google Play. Ilay azonao vidiana amin'ireo rohy apetrakao no mitondra azy?
Antonio Vega dia hoy izy:
Salama maraina aho nandray ny takelaka androany ary manao fitsapana ny fijanonan'ny android ary tsy manao na inona na inona ary mila mamerina miverina indray aho, ny nataoko dia ny mametraka lalao google izay napetraka fa tsy mandeha, tsy haiko raha nahazo anao izany ary inona no tsy maintsy atao.
Mamaly an'i antonio vega
Azonao atao ve ny milaza hoe aiza amin'ireo forum no napetrakao ho fantatrao rehefa tonga ny fanavaozana ny Android 5.1 ary aiza no hitadiavanao ireo tutorials hanaovana sary disk 10? Nividy azy aho ary tsara izao, ny zavatra ratsy fotsiny dia ny tsy ahitako fonon-tsarimihetsika / fitendry tsara indrindra
Luis Miguel Hervas dia hoy izy:
Pablo ao amin'ilay pejy mitovy amin'ny Onda-Tablet.com dia nahita rakotra fonosana ho an'ny V919 Airduos 24 dolara aho.
Valiny tamin'i Luis Miguel Hervas
Luis Efa hitako ilay teo amin'ilay pejy fa nitady ilay iray toa ilay eo amin'ny sary aho, fitendry miaraka amin'ny trackpad ary akatony toy ny solosaina finday. Nanoratra tamin'izy ireo aho ary lazain'izy ireo amiko fa tsy manana izy ireo, fa ho an'ny sary ihany io.
Tsy manome efijery na vazivazy roa ambin'ny folo ora izy, nanome ahy ora 5 sy sasany izy, mora mafana, ary zara raha milatsaka ny metatra bateria mandritra ny fampiasanao azy, ka raha mampiasa azy indray ianao dia mety ho hitanao fa nihinana 3-5 na 8% (heveriko fa izany no tokony narotsany nandritra ny fampiasana azy, saingy somary tsy mahazo aina izy io). Amin'ny windows dia toa mandeha tsara ny marina. Mampalahelo ny android satria ny takelaka ihany no manana famolavolana tsara sy famaranana tsara, fa ny olan'ny bateria sy ny fanafanana ......
ofo1965 dia hoy izy:
Nahavita nanomboka Android aho tamin'ny alàlan'ny fanovana ny bokotra herinaratra sy fehezan-teny miaraka amin'izay. Misy fomba iray handehanana amin'ny rafitra iray hafa tsotra kokoa? Mandeha ho azy ve ny fanavaozana?
Valiny amin'ny ofo1965
POIR dia hoy izy:
Salama, nividy onda v919 Air CH 64gb sy 4 Ram aho saingy kely dia kely ny bateria, mahazatra ve sa ratsy ao an-trano ????
Valiny amin'i POIR
Nilaza izy ireo fa efa lany daty ilay takelaka ka tsy manamboatra ilay takelaka intsony izy ireo ary ankehitriny dia tsy misy ny fanohanana ara-teknika
Valiny tamin'i Roger
Ny Samsung Galaxy S7 miaraka amin'ny efijery mora tohina, USB Type-C ary karatra microSD
Avy amin'ny fanavaozana farany ny Android 6.0.1 hatramin'ny fanombohana OS (Video)